Madaxweynaha Puntland Dr Gaas oo Raali Gelin Buuxda siiyay Ima... | Universal Somali TV
Madaxweynaha Puntland Dr Gaas oo Raali Gelin Buuxda siiyay Imaaraatka Carabta.
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Somaliyed ee Puntland Dr C/Wali Maxamed Cali Gaas, ayaa markii uhoreysay ka hadlay wararka la xiriira in Imaaraatka Carabta ay isaga guureen Xerooyinkii Tababar ee kaga sugnaayeen Magaalada Boosaaso.
Gaas oo Duhurnimadii Maanta Saxaafada kula hadlay Xarunta Ciidanka badda Puntland oo ay Gacanta ku hayaan Imaaraatka ayaa soo bandhigay Muhiimada Maamulkiisa uu ugu fadhiyo Shaqooyinka ay ka hayeen Gobolka Bari.
Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa sheegay in Xiriir qoto dheer uu udhexeeyo Somaliya iyo Imaaraatka Carabta, Si gaar ah waxa uu utaabtay Dadaalada horumarineed ee ka sameeyeen deegaanada Puntland sanadihii udanbeeyay.
Gaas oo soo hadal qaaday waxa ka jira iney isaga Guureen Gobolka Bari ayuu sheegay in wararkaasi ay been abuur yihiin oo aaney jirin Saraakiil ka tagtay Boosaaso, waxa uu sidoo kale beeniyay in Sabtidii lagu carqaladeeyay Garoonka Boosaaso Tababrayaashii doonayay iney Garoonka ka duulaan.
Warbaahinta ayuu sheegay Madaxweynaha Puntland iney qoreen warar Xaqiiqda ka fog, Wuxuuna u soo jeediyay iney iska hubiyaan wararka ay qorayaan kahor inta aysan sii deyn.
Imaaraatka Carabta ayuu tilmaamay in Puntland ka saaciday la dagaalanka Kooxaha Shabaab, Daacish, Burcad Badeeda iyo Dalalka SHisheeye ee Kaluumeysiga Sharci darada ah ka wada Xeebaha Maamulkiisa.
Saraakiisha Imaaraatka carabta ayuu sheegay iney tababareen ku dhawaad Laba Kun oo Ciidanka Puntland ah kuwaasoo haatan ku sugan Boosaaso,Garacad,Ceelaanyo, Eyl, Isku SHuban, Xaafuun, Baar Gaal, Qandala ilaa laas Qorey, Kuwaasoo dagaal ka wada badda Barriga.
Ciidamada ay udhiseen Imaaraatka Carabta ayuu ku sifeeyay iney kamid yihiin kuwa ugu tayada wanaagsan ee ka howlgala Gobolada Dalka, Sidoo kale waxa uu Cadeeyay in qalabka ay heystaan aaney helin Ciidamada kale ee ku sugan Guud ahaan Gobolada Kale ee Dalka.
Madaxweynaha Puntland Dr C/Wali Maxamed Cali Gaas ayaa fariin udiray Imaaraatka Carabta oo ku aadan iney sii joogaan deegaanada Puntland ayna sii laba Jibaaraan howlihii lagu dhisayay Ciidamada.
Gaas ayaa Qiray ineysan heleynin Cid ubadali karta Maamulkooda Imaaraatka Carabta, Wuxuuna siiyay Raali Gelin Buux, Isagoona uga cudur daaray waxyaabaha ka yimaada dhanka Dowladda Dhexe ee Somaliya.
Si Kastaba, Imaaraatka Carabta iyo Puntland ayaa saameeyay Khilaafka udhexeeya Dowladda Dhexe iyo Isu taga Imaaraatka Carabta, kaasoo haatan gaaray meeshii ugu hooseysay, Waloow markan Dowladda Dhexe ay dalbaneyso in arinta xal laga gaaro.
Kan-xigaKooxo Hubeysan oo Wiil dhalinyaro ah ...
Kan-horeMandheera: 6 qof oo laga badbaadiyay...
39,262,403 unique visits